कश्यपको कथा : हाँसो नैसर्गिक अधिकार हो | Ratopati
कश्यपको कथा : हाँसो नैसर्गिक अधिकार हो
personकमल रिजाल exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक २३, २०७८ chat_bubble_outline0
अघि कुनै बेला एउटा गाउँमा एकजना विनोदप्रेमी सामन्त थिए । उनी गाउँमा अनेक किसिमका प्रतियोगिता आयोजना गरी आफू पनि प्रशन्न रहन्थे र अरूलाई पनि प्रशन्न गराउने प्रयास गर्थे । त्यस्तैमा एकपटक उनलाई हाँस्ने प्रतियोगिता आयोजना गराउन मन लाग्यो र सोही अनुसार घोषणा गराए ।
तोकिएको समयमा प्रतियोगिता सुरू भयो । सहभागीहरू जोरले हाँस्न लागे । प्रतियोगितामा स्वयं सामन्तको छोरासमेत सहभागी थिए । संयोग भनौँ वा विधिविडम्बना उनी यति बढी हाँसे कि यसैका कारण उनको मृत्यु भयो । अब सामन्तलाई आपद प¥यो । खुसीको लागि आयोजना गरिएको प्रतियोगिता शोकमा परिणत भयो । लामो समयसम्म उनी शोकबाट बाहिर आउनै सकेनन् । जब आए तब आइन्दा गाउँमा कसैले पनि हाँस्न पाउने उर्दी जारी गराए ।
यहाँ सामन्तको उद्देश्य नराम्रो थिएन । जब कोही हाँसेको देख्थे तब छोराकोे सम्झना भएर पीडा बल्झिने गथ्र्यो । त्यस्तो नहोस् भनेर नै यस्तो निर्णय गरेका थिए तर गाउँलेहरूलाई भने यही नै दुःखको कारण बन्न पुग्यो । जीवनलाई सहज बनाउन हाँसो आवश्यक हुन्छ तर यहाँ त्यही बन्द भएको थियो, जसका कारण पूरा गाउँ नै शोकमग्न देखिन थाल्यो ।
भाइभारदारलाई लाग्यो यो त अति नै हो तर गरुन् पनि के । हाँसो खुलाउन लागेशक्ति प्रयास गरेकै हुन् । सामन्तलाई हदैसम्म दवाव दिने काप पनि नगरेका होइनन् तर उनले सुन्ने कान लगाएनन् । जति नै प्रयास गर्दा पनि केही नलागेपछि भारदारहरू समस्याको पोको लिएर चतुर्भुज शर्मा (चतुरे) समक्ष पुगे । उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि चतुरेले चाडै नै समाधान निकल्ने आश्वासन दिँदै विदा गरी एकजना सहयोगीको कान फुकेर पठाए ।
समय बित्दै गयो एकदिन बिहानैदेखि अचानख गाउँको बीचमा रहेको सिमलको रुख जोरले हाँस्न थाल्यो । रुख हाँसेको देखेर त्यसबाट जति जना जान्थे सबै एक्लै हाँस्दै हिँड्ने गर्थे । उनीहरूलाई हाँस्न मनाइ छ भन्ने थाहा नभएको होइन । तैपनि के हुन्थ्यो कुन्नि जब रुख हाँसेको सम्झन्थे तब एकाएक हाँस्न पुगिरहेका हुन्थे ।
बिस्तारै यो कुरा फैलिएर गाउँभरी पुग्यो । गाउँलेहरू जब अर्को एक्लै हाँसेको देख्थे तब आफू पनि एक्लै हाँस्न थाल्थे । हुँदाहुँदा यसले भारदारहरूलाई पनि छाडेन । उनीहरू पनि एक्लाएक्लै हाँस्दै दरवारी सभामा प्रवेश गर्न थाले । जति भारदार आउँथे सबैको हालत एउटै देखेर सामन्तको पनि हाँसो फुत्कियो । उनी पनि एक्लै जोरले हाँस्न थाले । सायद पूर्व निर्णय सम्झेछन् क्यारे तत्कालै संयमित हुँदै भने–
‘अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ । भन्नुहोस् यस्तो धृष्टता किन गर्नुभयो ?’
सभासदहरू मुखामुख गर्न थाले । सबै अरू हाँसेको देखेर नै हाँसेका थिए । उनीहरूले सामन्तलाई यथार्थ कुरा बताए ।
त्यसपछि सुरूमा हाँस्ने व्यक्तिको खोजी हुन थाल्यो । जति पनि भेटिन्थे सबै अर्कोलाई देखाउँथे । एकपछि अर्को गर्दै केरकार गर्दै जाँदा त्यही व्यक्तिसम्म पुगियो, जो पहिले हाँसेका थिए । केरकार गर्दा थाहा भयो उनी पनि सिमलको रुख हाँसको देखे हाँसेका रहेछन् ।
अनि भारदार टोली सिमलको रुखसमक्ष पुगे, जो त्यतिबेला पनि हाँसिरहेको थियो । मान्छे हेर्दा देखिँदैन थियो तर हाँसो भने एकनाशले आइरहेको थियो । अन्त्यमा सिमलको रुखमै कुनै रहश्य हुनुपर्छ भन्ने निधो गरी फेदमा आगो फुक्न थाले । धुवाले उकुसमुकुस भएपछि एक जना सज्जन रुखको टोड्काबाट बाहिर निस्केर चित्याउन लागे ।
उनलाई सामन्तसमक्ष पेश गरियो । उनले पनि चतुरेको ईसारामा यस्तो भएको साबिती बयान दिए । त्यसपछि चतुरेलाई बोलाएर सामन्त आफैँले केरकार गर्दै भने–
‘भन्नुहोस् चतुर्भुजजी ! यस्तो अपराध किन गर्नुभयो ।’
चतुरेले विनम्रतापूर्वक भने–
‘अपराध होइन महाराज ! हजुरकै सेवा गरेको हुँ ।’
‘मेरै आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने अनि मेरै सेवा गरेको बाहाना गर्ने ?’
‘बाहाना होइन सरकार ! यथार्थ नै हो ।’
‘कसरी ? तत्कालै प्रष्ट पार्ने छौ, होइन भने दण्डित गर्नेछु ।’
चतुरेले नालीबेली लगाउँदै भने–
‘महाराज ! हाँसो मानिसको प्रकृति प्रदत्त गुण हो । हाँस्दा अनेक किसिमका रोग आफैँ निको भइरहेका हुन्छन् र मानिसले दीर्घ जीवन पाउँछन् । यसै निम्ति नै प्रकृतिले मानिसलाई हाँसो दिपठाएको हो । जसरी मानिसलाई रुन सिकाउनुपर्दैन त्यसैगरी हाँस्न पनि सिकाउनुपर्दैन । यो जन्मदै साथ आएको हुन्छ र मर्ने बेलासम्म पनि साथैरन्छ । प्रकृतिमा अन्य प्राणीको भन्दा मानिसको आयु बढी हुनुको मूल कारण भनेकै यही हो । मानिसबाहेकका प्राणी हाँस्न सक्दैनन् त्यसैले उनीहरूको आयुृ छोटो हुन्छ तर मानिसको अवस्था भिन्नै छ ।’
‘यसको अर्थ प्रकृतिमा मानिस बाहेक लामो आयु भएका अन्य प्राणी हुँदैनन् भन्ने बुझौ ?’
‘त्यसो पनि होइन महाराज !’
‘अपवादमा हुन्छ केही प्राणी तर ती वायु आहार गरेर पनि बाँच्न सक्छन् ।’
‘यो त बुझियो । यसबाट मेरो सेवा चाहिँ कसरी भयो नि ?’
‘किन भएन सरकार !’
‘त्यही त भनेको, कसरी भयो ?’
‘गाउँ हजुरको भएपछि गाउँले पनि हजुरकै होइनन् र ?’
‘हो नि । यो पनि प्रश्न हो र ?’
‘यसको अर्थ गाउँलेहरू खुसी भए भने तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ होइन ?’
‘यो पनि सही हो ।’
‘त्यसो भए हाँस्नु पनि हजुरकै सेवा भएन त ?’
बल्ल सामन्तको होस खुल्यो । उनले ठूलै धनराशि पारितोषिक दिएर चतुरेलाई विदा गरे र गाउँलेहरूसित माफी माग्दै भने–
‘पुत्रशोकले अन्धो बनाएकाले ठूलै गल्ती भएको रहेछ । यसका लागि सर्वप्रथम तपाईँहरूसित माफी माग्छु र यही सभाबाट आइन्दा सबैको हाँस्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको घोषणा गर्छुृ ।’
त्यसपछि गाउँलेहरू चतुरेको र सामन्तको जयजयाकार गर्दै घरतिर लागे । भनिन्छ अति सर्वत्र वर्जयेत । हाँस्न पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो यसलाई कसैले पनि कुनै पनि बाहानामा कुण्ठित पार्न सक्दैन, मिल्दैन तर त्यही हाँसो पनि एउटा सीमासम्म मात्र उचित हुन्छ । अन्यथा शोकको कारण बन्न पनि बेर लाग्दैन ।
बालोपयोगी केही सामान्य ज्ञान